ချောကလက်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူနှိပ်စက်နိုင်သည် (Dark + Milk + White) - အချက်အပြုတ်နည်းစနစ်
ချောကလက် tempering ခက်ခဲဖြစ်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး! ကျွန်ုပ်၏ချောကလက်ကိုမျိုးစေ့နည်းဖြင့်ညှပ်ခဲ့ဖူးသော်လည်းမိုက်ကရိုဝေ့ (ဖ်) ၌မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုလေ့လာပြီးသောအခါ၎င်းသည်နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်မံ၍ ပြုလုပ်တော့မည်မဟုတ်ပါ။ ဒါကမင်းရဲ့ချောကလက်ကိုလျော့ပါးအောင်လုပ်ပေးတဲ့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါ ပူပြင်းတဲ့ချောကလက်ဗုံး ။
သငျသညျချောကလက်ကို temper သောအခါ, သင်တစ် ဦး သတ်သတ်မှတ်မှတ်လမ်းအတွက်ချောကလက်အပူနှင့်အအေးနေကြသည်။ သငျသညျမှန်ကန်စွာ tempert တဲ့အခါ, ကိုကိုးထောပတ်အတွင်းရှိ crystals သူတို့ချောကလက်အေးတဲ့အခါမှာသူတို့တစ်တွေသတ်သတ်မှတ်မှတ်နိုင်ရန်အတွက်စီစဉ်ပေး။ စနစ်တကျလည်ပတ်ထားသောချောကလက်သည်တောက်ပ။ အခန်းအပူချိန်တွင်ခိုင်မြဲစွာထားရှိပြီးသင်ဝင်ခါသောအခါချွန်ထက်သော SNAP ရှိသည်။
သင်သည်ချောကလက်ကိုအရည်ပျော်သွားပြီးအပူချိန် 95 aboveF အထက်ရောက်သောအခါသင့်ချောကလက်သည်စိတ်အေးသွားလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဤချောကလက်ကိုအသုံးပြုရန်ကြိုးစားပါက၎င်းသည်သင်၏လက်၌ပျော့ပျောင်းလွင့်သွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
သင်ကမုန့်ဖုတ်နေလျှင်ချောကလက်အေးဆေးမှုကိုစိတ်ပူစရာမလိုပါ၊ သို့သော်သင်သည်သကြားလုံးများပြုလုပ်နေခြင်းသို့မဟုတ်စတော်ဘယ်ရီနှစ်ခြင်းပြုလုပ်နေလျှင်ချောကလက်ကိုအေးအေးဆေးဆေးထားရမည်။ မှိုချောကလက်အောင်နှင့်အတူတူပါပဲ။ ချောကလက်ကိုပုံမှန်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်။
မိုက်ကရိုဝေ့ (ဖ်) မီးဖို၌အပူချိန်လွန်ကဲခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ အလွန်ကောင်းသည်မှာအလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ မိုက်ကရိုဝေ့ (ဖ်) တွင်ချောကလက်ကိုအောင်မြင်စွာဖြတ်နိုင်အောင်သင်ကိရိယာအနည်းငယ်သာလိုအပ်သည်။ * ဤစာရင်းတွင်တွဲဖက်လင့်ခ်များပါရှိသည်။ *
မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်တွင်ချောကလက်အရည်ပျော်စေရန်အတွက် silicone သို့မဟုတ်ပလပ်စတစ်အိုး။
ချောကလက်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည်။ အစစ်အမှန်ချောကလက်နှင့်အတု (ဒြပ်ပေါင်းများ) ချောကလက်။ ခြားနားချက်ကိုပြောပြရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာပါဝင်ပစ္စည်းများကိုဖတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုကိုးထောပတ်ဟုပြောပါက၎င်းသည်အမှန်တကယ်ချောကလက်ဖြစ်သည်။ သငျသညျ temper လိမ့်မယ်ဆိုရင်သင်အမှန်တကယ်ချောကလက်လိုအပ်ပါတယ်။
သင်ကပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဆီလီကွန်သို့မဟုတ်ပလပ်စတစ်မှိုအတွက်သို့မဟုတ်ပေါင်းစပ်ထားသောချောကလက်များကိုပေါင်းစပ်ချောကလက်ကိုသုံးနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းတွင်အစစ်အမှန်ချောကလက်ရှိသည့် SNAP မရှိပါ။ ဒါဟာအစတစ် ဦး polycarbonate မှိုမှလွှတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ပေါင်းစပ်သောချောကလက်သည်အစစ်အမှန်ချောကလက်ထက်အပူချိန်အလွန်များပြီးအရည်ပျော်သည်။ စစ်မှန်သောချောကလက်သည်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်တွင်အရည်ပျော်သွားသောကြောင့်လျှာကိုလျှာပေါ်တွင်ပျော်ဝင်သွားသည်။ ပေါင်းစပ်သောချောကလက်ကိုဝါးရန်လိုသည်။
ငါကြိုက်တယ် Callebaut Semi- ချိုမြိန် callets ။ ဒါဟာတော်တော်လေးပုံမှန်ချောကလက်နဲ့သိပ်စျေးကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ ၎င်းသည် ၅၄% သောကိုကိုးအစိုင်အခဲနှင့်ကိုကိုးထောပတ် ၃၆% ဖြစ်သည်။ ကိုကိုးအစိုင်အခဲ% များလေ၊ ချောကလက်ပိုထူလေလေဖြစ်သည်။ နို့ချောကလက်နှင့်အဖြူရောင်ချောကလက်တို့တွင်သကြားနှင့်နို့ထွက်ပစ္စည်းများပါ ၀ င်သည်။
ကောင်းပြီငါတို့ရဲ့ချောကလက် tempering ရကုန်အံ့! သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မည့်နည်းလမ်းကိုရွေးချယ်ပါ။ သို့သော်မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်တွင်ချောကလက်ကိုအအေးခံရန်သင့်အားအကြံပေးလိုပါသည်။
မိုက်ကရိုဝေ့ (ဖ်) တွင်ချောကလက်ကိုမည်သို့အေးအောင်ထားရမည်နည်း
သင်၏ချောကလက်ကိုစိတ်အေးအေးထားရန်သင်ချောကလက်၏အပူချိန်ကိုအာရုံစိုက်သင့်သည်။ Semi-ချိုသောချောကလက် 88F-90F အထက်ဘယ်တော့မှမသွားသင့်ဘူး။ နို့ချောကလက် 84F-86F အထက်ဘယ်တော့မှမသွားသင့်ဘူး။ အဖြူသို့မဟုတ်အရောင်ချောကလက် 82F-84F အထက်ဘယ်တော့မှမသငျ့သညျ ဒီချောကလက်မှာကိုကိုးထောပတ်ပါဝင်ရမယ်။
12 oz semi-sweet ချောကလက်ကိုသင်၏ပလပ်စတစ် (သို့) silicone ပန်းကန်လုံးနှင့်မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်တွင်မြင့်မားစွာစက္ကန့် ၃၀ ကြာအောင်ထားပါ။
မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်ကိုနောက်ထပ် ၃၀ စက္ကန့်၊ ၁၅ စက္ကန့်၊ ၁၀ စက္ကန့်ကြာသောမိုက်ခရိုဝေ့ဖ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအပူအကြားအတွက်နှိုးဆော်။ ဒီနည်းကိုမြန်မြန်မလုပ်ပါနဲ့!
ချောကလက်ကိုဤနည်းကိုသုံးခြင်း၏လျှို့ဝှက်ချက်သည်အပူချိန်ကိုထိန်းချုပ်သည်။ နေသမျှကာလပတ်လုံးကသင့်လျော်သောအပူချိန်အထက်မသွားဘူးအဖြစ်ထို့နောက်ကိုကိုးထောပတ်အတွင်းရှိ crystals နဂိုအတိုင်းရှိနေဆဲနှင့်ချောကလက်ဒေါသထဲမှာရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ဒါကနည်းနည်းလေးချောကလက်အနည်းငယ်ကိုညှိုးနွမ်းဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါ။
အကယ်၍ မင်းရဲ့ချောကလက်အရမ်းပူလာရင်မင်းစိတ်ပူစရာမလိုဘူး၊ မျိုးစေ့နည်းလမ်း ။ သင်၏ချောကလက်ကိုအခြားပန်းကန်တစ်ခုထဲသို့ပြောင်းပြီးအရည်ကျိုထားသောချောကလက်ထဲသို့အနည်းငယ်မအရည်ပျော်သောချောကလက်အနည်းငယ်ထည့်ပြီး97ºFအထိအေးသည်အထိမွှေပေးပါ။
ချောကလက်၏ 2/3 အရည်ပျော် 115ºFမရောက်မချင်းသင်ဟာနှစ်ဆဘွိုင်လာကိုလိုအပ်တယ်။ ပူသောအစက်များတားဆီးဖို့အဆက်မပြတ်နှိုးဆော်။ သင်၏ချောကလက်ထဲသို့ရေနွေးငွေ့သို့မဟုတ်ရေကျဆင်းခြင်းမှကာကွယ်ရန်ပန်းကန်သည်သင်၏တူညီသောရေကိုခိုင်မြဲစွာသေချာစွာစစ်ဆေးပါ
အပူမှချောကလက်ကိုဖယ်ရှားပါ။ ကျန်ရှိနေသေးသောမအရည်ကျိုသောချောကလက်၏ ၁/၂ ကိုထည့်ပါ နောက်ကျောပန်းကန်ထဲသို့။ အရည်ပျော်ရန်မွှေပေးပါ။ ဤသည်ချောကလက်ကိုချအေး။ အအေးပေးသည့်ဖြစ်စဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်ရန်အရည်ပျော်ထားသောချောကလက်ကိုအခြားပန်းကန်တစ်ခုထဲသို့လွှဲပြောင်းပါ။ ချောကလက်သည် ၁၀၀ ºFအထိမွှေပေးပါ
ကျန်ရှိသောချောကလက်များကိုသေးငယ်သောခုတ်ပါ။ 96-98ºFတွင်သင်၏ကုန်တယ်ချောကလက်ကိုထည့်ပါ နှင့်သင်၏နွေးချောကလက်သို့နှိုးဆော်။ 95ºFသည်ကိုကိုးထောင့်တွင်ရှိသောအပွင့်များစတင်ပွင့်လန်းလာခြင်းကြောင့်အပူချိန်မရောက်မီတွင်ချောကလက်များကိုထည့်သွင်းပေးခြင်းဖြင့်သင့်တော်သော crystals များကြီးထွားလာခြင်းနှင့်ကျန်မခံမရပ်ထားသောချောကလက်များကိုအေးဆေးတည်ငြိမ်စေခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
ချောကလက်ကို ၅ မိနစ်တိုင်းဆက်ပြီးမွှေပေးပါ 79ºFမှအအေး
ပူနွေးသောချောကလက်နှစ်ဘွိုင်လာအပေါ် ၅ စက္ကန့်ကြာအောင်ချောကလက်မရောက်ရှိမှီ 86 chocolateF-90ºFအလွန်ဂရုစိုက်ပါ သောမှိုအတွက်အသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်သကြားလုံးအောင်များအတွက်ကောင်းတစ် ဦး အလုပ်လုပ်အပူချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုကိုးထောင့် beta crystals ကိုသုံးပြီးချောကလက်ကိုဘယ်လိုအေးစက်အောင်လုပ်ရမလဲ
ချောကလက်ကိုအေးအောင်လုပ်နိုင်သည့်နောက်တစ်နည်းမှာကိုကိုးအားဖြင့်ကိုကိုးထောင့်ပုံသဏ္ဌာန်များကိုသုံးခြင်းဖြစ်သည် beta ကိုကြည်လင် ။ ဒါကနည်းနည်းစျေးကြီးပေမယ့်ပြည့်စုံလုံလောက်မှုရှိတယ်။
ကျန်ရှိသောကျန်ရှိသော 1/3 ချောကလက်ကိုအအေးခံရန်အရည်ပျော်ထားသောချောကလက်ထဲသို့ပြန်ထည့်ပါ
၉၆ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်မှာ ၁% ထည့်ပါ beta ကိုကြည်လင် (ချောကလက် ၇ အောင်စလျှင် ၁ Tsp) ကောင်းမွန်စွာရောစပ်ပါ
အေးခဲသောချောကလက်ကို ၇၉ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်မှ ၈၆-၉၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အထိအသုံးပြုနိုင်သည်
အခုတော့သင့်ရဲ့ချောကလက်ကိုတင်းပြီးပြီဆိုရင်သင်ကချောကလက်နယ်ပယ်မှို၊ ပိုက်နဲ့ချောကလက်အလှဆင်ခြင်းနှင့်အခြားပျော်စရာအရာများစွာကိုအသုံးပြုပြီးချောကလက်စက်များပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ချောကလက်ကိုအပူထိန်းထားခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသောကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်မည်မျှအံ့အားသင့်သွားမည်ကိုသိသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်၏အလှဆင်ရာတွင်ချောကလက်ကိုမည်မျှအသုံးပြုမည်ကိုသင်သိပါလိမ့်မည်။
မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်တွင်ချောကလက်ကိုအလွယ်တကူသယ်ဆောင်နိုင်သည်။ ချောကလက်အနည်းငယ်ကိုညှို့ယူရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ပြင်ဆင်ချိန် -၅ မိနစ် ချက်ပြုတ်ချိန် -၅ မိနစ် ကယ်လိုရီ၁၄၄kcal
▢၁၂ oz (340 ဆ) ချောကလက် ကိုကိုးထောပတ်ဆံ့ရပါမည်
သင်၏ချောကလက်ကိုပလပ်စတစ် (သို့) ဆီလီကွန်ပန်းကန်လုံးထဲသို့မိုက်ကရိုဝေ့တွင်ထည့်ပြီးအပူကိုစက္ကန့် ၃၀ ကြာအောင်ထားပါ။ ထိုအခါနှိုးဆော်
နောက်ထပ်စက္ကန့် ၃၀ အတွင်းထပ်မံအပူပေး၊ နှိုးပါ၊ ထို့နောက် ၁၅ စက္ကန့်၊ ထပ်မံ၍ ၁၀ စက္ကန့်၊ မှောင်မိုက်သောချောကလက်အတွက်သင်၏အပူချိန်သည်90ºFထက်မကျော်လွန်အောင်သေချာပါစေ။ နို့ချောကလက်အတွက် 86F နှင့်အဖြူရောင်ချောကလက်အတွက် 84F ။ ဒီနည်းကိုမြန်မြန်မလုပ်ပါနဲ့
အကယ်၍ သင်၏ချောကလက်သည်အပြည့်အဝအရည်ပျော်။ မရပါကအရည်ပျော်သွားသည်အထိနောက်ထပ် ၅ စက္ကန့်သာလုပ်ဆောင်ပါ
ကိတ်မုန့်ပေါ်တွင် icing ထားရန်မည်သို့မည်ပုံ